Mootummaan Ityoophiyaa tamsa’ina Vayirasii Koroonaa to’achuuf Manneen Barnootaa akka cufaman ajaje - NuuralHudaa
Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad tamsa’ina Vayrasii koroonaa ittisuuf har’aa eegalee guyyoota 15’f manneen barnootaa akka cufaman ajajni dabruu beeksise. Dabalataanis Barattoota yuunvarsiititiif bakka jiranitti hordoffiin kan godhamuuf tahuu ibsame.
Haaluma wal fakkaatuun guutuu biyyattii keessatti sochiiwwan ispoortii fi walgahiiwwan adda addaa kan dhoorkaman yoo tahu, Waltajjiiwwan xixiqqaan beekamtii fi hordoffii Ministeera Fayyaatin gaggeeffamuu akka qabanis ibsuu isaa FBC’n gabaase.
Kana malees Vayirasii kana ittisuu Meeshaalee qulqullinaa, saamunaa, alkoolii fi kanneen biro barabaachisaa tahan mootummaan kan raabsuu tahuu beeksise.
Hanqina Traanspoortii hir’isuuf, konkolaattonni mootummaa, dhaabbilee fi namoonni dhuunfaa konkolaattota qabanis tumsa akka godhan muummichi ministeeraa kan gaafate tahuus odeeyfannoon ni addeessa. Dhaabbileen amantaa ammoo hordoftoonni isaanii akkaataa walitti qabaman irratti of eeggannaa akka godhan dhaamame.
Ityoophiyaa keessatti namoonni vaayrasii koroonaatin qabaman 5 kan gahan yoo tahu, namni shanaffaan Duubaayi irraa kan dhufe tahuu ibsame.
Rabbi ummata islaamaa kan irraa gorfamanii fi kan sababa toowbaa qulqulluu gara Rabbiitti deebi’anii milkaawan nuu haa godhu kun lola Rabbii waan ta’eef badii irra jirru irraa deebi’uun dirqama hunda keennaati kzk tika Rabbii keessa nuu turaa
madiina Hussen says:
amiiiiiin yaa rabbii amiiiiiin alhuma amiiiiiin jzkl
Milki Hussen says:
Manni baromsaa cufamuun isaa mirkanawee
Amiiiin Alahuma Amiiiiiiiiin
Amiiiiiiiin yaa rabal aalamiin walumaan hunda keenya inshaa allaah.
umaataa musilma hundayuu Raabbii haa tisuu mana barumsaa cufama bareeda garuu xiyaara hoo maa dhabachuu dhabee
HIIREEN QOODDAARABBIITII says:
Suwaalih jamaal says:
Rabbiin akka corona vayrisi kanarra naja nubasu rabbi nuha baasu
shagoyee Boqojii says:
shagoyee Boqojii saguree
shagoyee Boqojii saguree 💯
aswrwb jira jirtuu
Abdurahmaan jamaal says:
November 27, 2021 sa;aa 6:06 pm Update tahe